शीर्ष बिरालो | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! शीर्ष बिरालो | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
शीर्ष बिरालो सबै भन्दा राम्रो कार्टून थिम्ड मध्ये एक छ फल स्लट एउटै नाम प्रसिद्ध टिभी 80 का को शो बाट. यो खेलमा, तपाईं आफ्नो पाँच रील खेल्न प्राप्त र 20 धेरै संयोजन लागि बाटो बनाउन शर्त-रेखा. को रील शो बाट दृश्य समान न्यूयोर्क मा एक गोरेटो को पृष्ठभूमि छवि माथि राखिएको. कार्टून विषय को ज्याज संगीत खेल धेरै रमाइलो र रोचक बनाउँछ. संगीत धेरै धेरै आराम छ, त्यसैले तपाईंलाई खेल समयमा आफ्नो सुन्दर राख्न सक्नुहुन्छ. यो सट्टेबाजी £ 0.20 साथ सुरु हुन्छ तर तपाईं मात्र £ 500 हरेक पालोमा सम्म यो हुर्काउन सक्छन्.
यो प्रसिद्ध कार्टून शो आधारित फल स्लट खेल निलो छापा विकास भएको थियो. एक विभिन्न उन्नत गेमिङ प्रविधी समृद्ध अनुभव र विशेषज्ञता संग दुनिया मा शीर्ष विकासकर्ताहरू को. आफ्नो खेल जस्तै आईफोन उपकरणहरू समर्थन, आईप्याड, कम्प्युटर र विभिन्न स्मार्ट मोबाइल उपकरणहरू.
तपाईंको सम्झनाहरु फिर्ता ल्याउन मूल टिभि विभिन्न बिरालोहरु को रंगीन प्रतीक हो. अन्य दुई तपाईं दिन्छ गर्दा गुलाबी र सुन्तला बिरालोहरु आफ्नो खम्बामा 300x तिर्न 200 पटक. बिरालो प्रतीक तिर्ने शीर्ष तपाईं तिर्ने खेल नाम नेता छ 400 एक प्रकारको पाँच मा पटक. यो कि सजिलो विजेता बनाउन रील मा स्ट्याक प्रकट. यो कम सिक्का मूल्य प्रतीक फल स्लट खेल ज्याक गर्न ऐस कार्डहरू खेलिरहेका छन्. त्यहाँ स्लट लोगो र माछा हड्डी को प्रतीक द्वारा कवर सेतो प्लेट मा खेल दुई विशेष सुविधाहरू छन्.
जंगली विशेषता: माछा हड्डी प्रतीक जंगली छ र यो बोनस प्रतीक बाहेक सबै को लागि विकल्प. यो सबै मा देखिन्छ5रील र संयोजन को एक ठूलो संख्या सिर्जना. wilds पाँच पनि भुक्तानी 500 पाँच प्रतीक प्रदर्शनमा मा सिक्का.
स्क्याटर विशेषता: खेल लोगो यो को स्क्याटर छ फल स्लट खेल. यो केवल रील पाँच मा देखा पर्न सक्छन्, चार र तीन. जब सबै तीन देशमा, यो बोनस स्तर जहाँ तपाईं पाँच मास्टर योजना देखि छनोट गर्न प्राप्त अनलक. प्रत्येक मुक्त spins समावेश फरक बोनस प्रकट, नगद जीत र अन्य बोनस.
Hotdog पुन स्पिन: त्यहाँ जो केवल रील पाँच मा देखा पर्न सक्छन् एक हट डग प्रतीक हो. यो सम्पूर्ण रील कवर देखिन्छ र प्रत्येक स्पिन मा बायाँ गर्न बदलता प्रतीकको साथ पुन स्पिन प्रदान गर्दछ. प्रतीकको पहिलो रील बाहिर बाहिरिन्छ जब पुन स्पिन रोक्छ.
सारांश: अद्वितीय बोनस सुविधा र विशाल पुरस्कार एक Jackpot राउन्ड संग, तपाईं सजिलै यो मा लाभ को विशाल ऐसे बनाउन आशा गर्न सक्छौं फल स्लट खेल.
भाग्य हे 'को आइरिस भाग्य Spins
जंगली बिरालो घाटी